Xog Cusub oo laga helay safarka Madaxweynaha Puntland ee Baydhabo - Awdinle Online
Xog Cusub oo laga helay safarka Madaxweynaha Puntland ee Baydhabo
Xog dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa safarka Madaxweynaha Puntland uu ku tagay magaalada Baydhabo, waxaana ay wararku cadeynayaan in uu maalmihii u dambeeyey waday arrimo la xariira ole-ole siyaasadeed oo ku wajahan doorashada dhaw 2021-ka.
1- Mid kamid ah dalalka carbeed ee saameynta ku leh arrimaha Soomaaliya ayaa waday bilihii u dambeeyy qorshaha la xariira in siyaasiinta taabacsan ay noqdaan kuwa raadiya ama soo xula xildhibaano ay ku kalsoon yihiin, si doorashada 2021-ka ugu guuleysto musharax ay wataan dalalkan, tanni ayay qeyb ka tahay safarka Deni ee Koonfur Galbeed.
2- Madaxweyne Deni ayaa dhawaan u safri doona dalalka jaarka ah si uu ula kulmo xubno kasocda dawladdahan carbeed oo ay uga wada hadlaan qorshahan dhameystirkiisa.
3- Imaaraatka Carabta oo ku cadaadinaya Madaxweynaha Puntland Siciid Deni in uu ka mid noqdo musharaxiinta M/weyne-nimada 2021-ka, si loo kala dhantaalo codadka beesha Daarood.
Previous articleCiidamada Kenya oo dil iyo afduub ka geystay Gobolka Gedo
Next articleDhimasho & dhaawac ka dhashay Dad muruqmaal ah oo Dhisme ku dumay